Andro: 3 mey 2020
Nanambara ny 31 ny minisiteran'ny atitany ary ny fanitarana fitsangatsanganana mandritra ny andro iray hafa
18.04.2020 amin'ireo faritany manana metropolitan (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, miaraka amin'ilay boribory mitondra ny lohateny hoe "Entry City, Exit Measures" nalefa tany amin'ireo Governemanta miisa 81 tamin'ny 30. [More ...]
Fiaran-dalamby, manao sonia firaketana vaovao, miala ao anaty lay
Ny Tale jeneralin'ny TCDD Tasimacilik dia mitohy amin'ny fitaterana entana amin'ny vanimpotoana avo be mandritra ny vanim-potoana raha toa ka voatran'ny tsy mety ny Covid-19 ny varotra vahiny. Ny ela indrindra ary hatramin'izay hatramin'ny ela ny tsipika Baku-Tbilisi-Kars dia niasa tamin'ny volana lasa. [More ...]
Samsun Sivas Railway Line capacity dia hitombo 50 isan-jato
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nilaza fa efa tapitra ny asa vita amin'ny lalamby Samsun-Sivas, izay nakatona noho ny fanavaozana sy ny fanavaozana ny 29 septambra 2015. Nanomboka tamin'ny taona voalohany tany amin'ny Repoblika sy [More ...]
Makeup ho an'ny sekoly sy ny overspace any Ankara
Raha mitohy ny asa fotodrafitrasa ao Ankara Metropolitan, dia mitohy ihany koa ny asa manatsara ny tanàna sy ny laharam-pahamehana ao an-tanàna. Any amin'ireo overlay mitaky fikojakojana, fanamboarana ary hosodoko any amin'ireo afovoan-tanàna sy distrika [More ...]
Fandaharana ho an'ny fantsom-panafihana raha toa ka ao an-trano i Konya
Ny fivondronan'i Konya Metropolitan dia mitohy amin'ny lalambe sy làlambe amin'ny andro faran'ny làlana mandeha. Famenoana ny fandaminana ny arabe maro amin'ny famerana ny làlam-pandeha amin'ny herinandro lasa mba hanamaivanana ny fifamoivoizana an-tanàna. [More ...]
Asphalt dia napetraka tao amin'ny junction amin'ny Torolalana Izmit Seka
Ny kaominina Kocaeli Metropolitan, izay nametraka tetik'asa fitaterana zava-dehibe maro tao anatin'ny 16 taona lasa, dia mahatonga ny fitaterana ho mora kokoa amin'ny lalana, ny fitsangatsanganana ary maro hafa. Departemantan'ny siansa momba ny siansa ao amin'ny distrikan'i Izmit [More ...]
Ny dokotera Hotline dia tsy mitsahatra mampita vaovao amin'ny Izmirers
Ny Dokotera Mpanolotsaina ny Dokotera, izay nanoloran'ny kaominin'i Izmir Metropolitan mba hisorohana ny hamafin'ny hopitaly mandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina ary ny fitarihana ireo Izmirianina izay sahirana mankany amin'ny dokotera, dia manohy mampahafantatra ny vahoakan'ny Izmir. Afa-po amin'ny fampiharana ity ny mponina Izmir. Izmir Metropolitan [More ...]
Hisy fihemorana ny fiara an-trano ihany ve? Nanambara ny minisitra Varank
Minisitry ny indostrian'ny indostria sy ny teknolojia Mustafa Varank dia nilaza hoe: "Mazava ho azy fa mety ho herinandro vitsivitsy ho an'ny filalaovana, fa tsy misy fandikana ao amin'ilay drafitra lehibe. Ny namana tamin'ny faran'ny Torkia ny Cars Initiative vondrona miasa [More ...]
Fanombohana ny fanandramana ara-barotra amin'ny barika fiaran-dalamby ao Samsun Sivas Kalin rahampitso
Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra Karaismailoğlu Fair, izay iray amin'ireo voalohany Torkia lalamby tsipika ary rehefa nanompo 1932 taona ny asa fanompoana ho an'ny Samsun-Sivas tsipika matevina lalamby nisokatra tamin'ny 83 ny manavao Septambra 29, 2015 [More ...]
Somalia no adiresy voalohany tamin'ny fitaovana ara-pivelomana any ivelany
Ny respiratorera fikarakarana mafototra eo an-toerana, novolavolain'i Baykar, Biosys, Arçelik ary Aselsan amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, eo ambany fandrindran'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojia, ary nahazo marika feno avy amin'ireo mpitsabo taorian'ny fitsapana nahomby. [More ...]
UAVOS Mamita ny Fitsapana ny Helikoptera Fandefasana entana tsy nitarika
Miaraka amin'ny angidin'ny fandefasana entana tsy mitondra fiara UVH-170 vaovao, ny UAVOS dia lalana sy automatique avy amin'ny mpivarotra voalohany mankany amin'ny toerany amin'ny alàlan'ny làlana efa nofidina mialoha, ary avy eo miverina amin'ny toerana mankany amin'ny mpivarotra mampiasa ny lalana mitovy. [More ...]
Ny fanatanjahan-tena lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia hotanterahina voafetra noho ny COVID-19
Ny tafika amerikanina dia nanambara fa handray anjara mavitrika amin'ny fanatanjahantena Pasifika faha-27 (RIMPAC), fa ny fampiharana amin'ity taona ity, izay hitranga amin'ny 17 ka hatramin'ny 31 aogositra, dia hotanterahina amin'ny fomba kely kely noho ny coronavirus. USA [More ...]
Betsaka ny fitaovana fiarovana ara-pitsaboana nozaina tany Istanbul
Tamin'ny hetsika izay nataon'ny ekipan'ny minisiteran'ny varotra ao amin'ny Ministeran'ny varotra ao Istanbul Muratbey Customs Field, saron-tselatra 760, fonon-tanana 1 tapitrisa tapitrisa ho an'ny 310 tapitrisa ary 8 200 [More ...]
Tapitra ny fanapahan-kevitr'i Boeing ny fifanarahana eo amin'ny goavambe an'habakabaka, American Boeing sy ny Embraer breziliana. American Boeing miaraka amin'ny orinasa Embraer Breziliana, mpanamboatra fiaramanidina fahatelo lehibe indrindra eto an-tany [More ...]
Ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena dia nilaza fa mpampianatra 19990 ho voaray dia ho mpampianatra mpampianatra ao anatin'ny ministera hiasa amin'ny sampana sy faritany samihafa. Ny lalàna momba ny mpiasam-panjakana laharana 657, No. 652 [More ...]
Tao anatin'ny fanambarana nataon'ny Jeneraly Directorate ofways izay nifandraika tamin'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia nanasongadina fa misy fifamoivoizana be eny amin'ny làlan'ny TEM sy ny làlana mampifandray an'i Kavacık Junction-Mahmutbey West Junction-Kınalı Junction. [More ...]
Toeram-pitsaboana iray no napetraka teo amin'ny lalam-be 2 Billion an'ny seranam-piaramanidina Atatürk ..!
Mitohy ny fananganana hopitaly Yeşilköy, izay miorina eo amin'ny lalana roa amin'ny seranam-piaramanidina Ataturk mihidy, mitentina 2 miliara dolara. "Nopotehin'izy ireo ny teboka stratejika", hoy i Karabat CHP. Araka ny vaovao nataon'i Yusuf Demir avy any SÖZCÜ; [More ...]
Hikatona ny lalana ao anatin'ny ambaratongan'ny Tetikasa rafitry ny rafitr'asa andiany faha-3 any Meltem
Tao anatin'ny faritry ny Tetikasa Antalya Metropolitan faha-3 an'ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny arintany, dia ampahany amin'ny Meltem Boulevard eo anelanelan'ny İsmail Baha Sürelsan Avenue sy ny Tarık Akıltopu Avenue dia hikatona ny fifamoivoizana amin'ny alatsinainy 4 Mey. Meltem Boulevard [More ...]
Tapaka akondro Rehefa tafakatra avy any Van ho any Iran i TCDD Tasimaci tao anatin'ny 8 andro!
Tapaka ny akondro rehefa mivezivezy any Van mankany Iran ny fiaran-dalamby mandritra ny 8 andro !; Ny solombavambahoakan'i CHP Istanbul, Mahmut Tanal dia nizara lahatsary momba ny fitaterana entana amin'ny zotra TCDD amin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-ny. TCDD amin'ny horonantsary nizara [More ...]
Manohy ny diany IMM ny mponina ao Istanbul raha any an-trano
ContinuesBB dia manohy ny ezaka ataony mba hampialana ny fitaterana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny Giyimkent Avenue miaraka amin'ny TEM Yanyo. Ny 86% amin'ny fividianana fangalarana dia vita amin'ny fanamboarana làlana fifandraisana sy ny fifanolanana. Ekipa IMM mandray soa avy amin'ny curfew noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana [More ...]
Fivoarana 19 sy fitaterana entana an-dalamby
Eto amin'ny firenentsika dia 4 isan-jaton'ny fitaterana entana amam-pitaterana no vita amin'ny lalamby. Mazava fa ny fizarana areti-mifindra avy any ivelany dia maro tokoa amin'ny fiparitahan'ireny aretina ireny. Satria tsy misy lalamby any amin'ireo seranana maro, ny entana tonga any amin'ireo seranan-tsambo, [More ...]
Serap Timur Voatendry ho mpitantana ny tetik'asa rafitry ny Rail ao amin'ny IMM
Ny monisipaly Istanbul Metropolitan dia nanendry an'i Serap Timur, izay niandraikitra ny mpitantana ny faritra ao amin'ny DLH, fa tsy i Aslı Şahin Akyol, Mpitantana ny Tetikasa Rail System izay noroahiny vao haingana. lasa [More ...]
Androany amin'ny tantara: 3 May 1873 Haydarpaşa-İzmit railway
Androany tamin'ny Tantara 3 Mey 1873 niditra tao amin'ny serivisy tao Izmit ny lalamby Haydarpaşa-Izmit niaraka tamin'ny lanonana izay efa vonona i Grand Vizier Rüştü Pasha. Ilay tsipika 91 km dia natsangana tao anatin'ny 2 taona. 3 Mey 1946 Mariş-Köprüağzı fifandraisana fototra [More ...]